Ukuzulazula ukuze uguqule
Bhalisa ngaphambi kwesikhathi
Uhlelo olusha lokutshala imali lwezezikhathi
I-Trading Battle Net.com ngumphakathi wokuhweba wezohwebo onolwazi lokuvuselela izinkampani, izibuyekezo, nezindaba.
Iya kusikhathi senzuzo esheshayo
Isikhathi esiguqukayo esisheshayo
Isikhathi sempi, inzuzo, inani lokulahleka lingakhethwa
Okungenani imizuzu engama-30, inzuzo engama-50% ingabonakala
Idiphozithi esheshayo yokuzenzakalelayo nohlelo lokuhoxisa
Iya ekuphathweni kwempahla okuphephile
Ukuphathwa kwempahla okuphephile
Ubuchwepheshe beBlockchain, ukuphathwa komlando wokuthengiselana
Uhlelo lokuphepha olukhulu lokushintshana
VULA Ishadi le-API
Iya kunoma ngubani, isizukulwane senzuzo ephezulu
Isizukulwane senzuzo ephezulu yawo wonke umuntu
Ukukhetha ubungozi ngqo
Imali encane, imbuyiselo ephezulu
Imali ephezulu, ukuphathwa kwezingozi nezinzuzo ezizinzile
Iya ohlelweni lokunyathela okulungile
Uhlelo lokunyathela olungafanele
Konke kuqala ngaphansi kwezimo ezifanayo
Ukuncintisana Kwamakhono Wakho Wobuntu be-VS
Uhlelo lobuchwepheshe beBlockchain
Isikhathi sokutshala imizuzu engama-30! Isivuno siphindwe kabili!
Uhlelo lokuhweba olungenzeleli kanye nesikhundla kusetshenziswa ubuchwepheshe be-blockchain, okumsulwa kokusatshalaliswa kwemali yangasese yangasese
Ukuqanjwa kabusha kweparadigm yezezimali
Imvelo efanelekile yokuhweba
Ngokusebenzisa isikhombimsebenzisi esisebenzayo futhi injini ephezulu yokuqinisa
Ukuhweba okusheshayo nokunembile
Uhlelo lokuhweba lwamahora angama-24
Kwenzelwe i-PC kanye neselula,
Ukuhweba okulula futhi okulula noma kunini, noma kuphi
Ukuthengiswa kwemizuzu engama-30
Yehlisa isikhathi sokuthola inzuzo
Inenzuzo emakethe yebhere
Khetha isilinganiso sakho sokulahleka
Imikhuba ephakeme nemivuzo ephezulu
Okokusebenza futhi okungenamandla
Umncintiswano wokutshala imali wangasese ngamunye
Dynamic real loom like umdlalo
Ukuhweba Ipulatifomu Yempi
Ipulatifomu yomqondo omusha usebenzisa ubuchwepheshe be-blockchain
Ukuhweba okufana nemidlalo
Isimo sokuxhuma kakhulu
I-akhawunti ye-Facebook yokuhweba efana nomdlalo
I-akhawunti ye-Twitter yokuhweba okufana nomdlalo
I-akhawunti ye-Behance yokuhweba okufana nomdlalo
I-akhawunti Dribble yokuhweba okufana nomdlalo
I-akhawunti ye-Linkedin yokuhweba okufana nomdlalo
Sihlela ukunika abasebenzisi umuzwa wokudlala umdlalo wamasu wokulinganisa. Ngokuzayo, amathokheni ahlukahlukene angasetshenziselwa ukuthenga nokusebenzisa imisebenzi ewusizo yokuhweba.
Isebenzisa i-Open API yokushintshaniswa okukhulu
I-akhawunti ye-Facebook ye-API ye-OPEN
I-akhawunti ye-Twitter ye-VULA API
I-akhawunti ye-Behance ye-OPEN API
I-akhawunti Dribble ye-OPEN API
I-akhawunti ye-Linkedin ye-OPEN API
Ngokungafani nezinsizakalo zokutshala imali ezijwayelekile, insizakalo yempi yokuhweba isebenzisa i-API yangempela ye-cryptocurrency exchange evulekile ukusebenzisa izingcaphuno zesikhathi sangempela kanye nokusebenza kwemali njengoba injalo.
Imithetho Yemidlalo yamahhala
Imithetho yempi enqunywe ngumsebenzisi
I-akhawunti ye-Facebook yemithetho yamahhala yemidlalo
I-akhawunti ye-Twitter yemithetho yamahhala yomdlalo
I-akhawunti ye-Behance yemithetho yamahhala yomdlalo
I-akhawunti Dribble yemithetho yamahhala yemidlalo
I-akhawunti ye-Linkedin yemithetho yamahhala yomdlalo
Yonke imithetho yempi yensiza ye-Trading Battle inqunywa ngumsebenzisi. Umsebenzisi unquma imithetho ngaphandle kwemithetho ebekwe yinkampani. Sizokwenza impi yokuhweba phakathi kwabasebenzisi abaqoqiwe ngokuya ngemithetho ebekwe umsebenzisi. Akukho kungqubuzana komsebenzisi ngemiphumela nezinzuzo.
Isebenzisa izinto zomdlalo
I-akhawunti ye-Facebook yethokheni ye-TBet
I-akhawunti ye-Twitter yophawu lweTBB
I-akhawunti kaBehance yophawu lweTBT
I-akhawunti Dribble yophawu lweTBB
I-akhawunti ye-Linkedin yophawu lweTBB
Amathokheni ahlukahlukene angadingeka ukudala igumbi lokulwa, futhi inani elithile lemivuzo likhokhwa kumalungu adala indawo yempi. Kuzokwethulwa imidlalo ehlukahlukene yama-mini kwinkonzo yokubamba iqhaza yemidlalo encane. Umdlalo we-mini ngumdlalo we-probabilistic futhi uzosebenzisa amathokheni ahlukahlukene ukuhlanganyela.
Uhlelo oluthembekile nobuchwepheshe
Umcimbi wobulungu be-Advance (amathokheni we-30 TBET)
Faka isicelo sobulungu
Imininingwane Yempi Yokuhweba
Izindaba Zokubhebhana Zempi Yokuhweba, Izindlela Zokuzazi, Izindaba, Umphakathi Wezohwebo
Izimpi ezingaphezu kuka-1 XNUMX ezibhalisiwe zokuhweba
Ipulatifomu yethu yempi yokulwa idlulele ngaphezu kwababhalisile be-6 emhlabeni jikelele manje ezinsukwini ezingama-10 ngemuva kwesimemezelo sangaphambi kokubhalisela komcimbi kaJuni 30. Ngiyabonga futhi ngentshisekelo nothando lwakho. Sizokwenza konke okusemandleni ukukukhombisa ngensizakalo ephephe futhi engcono yokubuyisa inzalo yakho. Ngiyabonga futhi. Bonke abasebenzi bepulatifomu yempi yokulwa.
Ukubuka konke kwethokheni ye-TBET
Ukubuka konke kwethokheni le-TBET Sawubona, lena yiMpi yokuhweba. I-Trading Battle Service iyipulatifomu yabasebenzisi ukusetha imithetho yempi (isikhathi, umklomelo, njll.) Futhi bahwebe amathokheni ahlukahlukene ekushintshaniseni okukhulu ukuqhuba izimpi nokunquma amazinga okuwina imiklomelo. Namuhla, ngithanda ukuchaza ithokheni ye-TBET. I-TBET Ithokheni I-Toll Overview I-TBET Ithokheni yi-cryptocurrency ezosebenza njengemali yokwenza amaphrojekthi futhi isebenzise nezinsizakalo zokulwa, nezinsizakalo ezimpini zokuhweba. Isingeniso Ukuhlolwa okubanzi kweTBETET[...]
Ukusetshenziswa kwamathokheni we-TBET
Ukusetshenziswa kwamathokheni we-TBET amathokheni we-TBET asetshenziselwa ukusebenzisa imisebenzi ehlukahlukene nezinsizakalo ezinikezwe ezimpini zokuhweba. Ngaphezu kwalokho, umsebenzi wokusebenzisa amathokheni we-TBET uzothuthukiswa ngokuqhubekayo. Disc Isaphulelo Sokukhokhiswa Kwempi Yempi yokuhweba Isimo senkonzo yokuhweba singehluka ngokuya ngesilinganiso sokubuya kwe-0.01%. Ngaphezu kwalokho, ukuze kwenziwe inzuzo ekushintshashintsheni kwemakethe ephansi, amakhomishini aphansi anethonya elihle. Abahlanganyeli bempi Isingeniso Ukusetshenziswa Kakhulu Kwethokheni ye-TBET[...]
Uhlelo lokuhweba lweBlockchain
I-blockchain Trading System Sizosebenzisa ubuchwepheshe be-blockchain ngenkuthalo ukuveza sobala kwezimpi zokuhweba.Sizofunda ukuqiniseka ukuthi ukuthengiselana kungenziwa ngemuva kokuthi yonke imiyalo yokuthengisa / yokuthenga iphasise ubufakazi be-blockchain. Ukuze unikele ngezinsizakalo ezinjalo, kuyadingeka ukuthuthukisa uhlelo lwe-blockchain olunobufakazi bokuthenga kwangempela. Sisebenzisa izixazululo ze-blockchain ezivela ezinkampanini ezinobuchwepheshe obufakazelwe nokuphepha okuphezulu ukuthuthukisa uhlelo. Isingeniso Uhlelo Olusha Lokuhweba Nge-blockchain[...]
Kungani wakhe impi yokuhweba kwi-blockchain
Sinesipiliyoni ekusebenziseni izinsizakalo zokutshala imali ze-cryptocurrency ngaphambi kokulungiselela iphrojekthi yokulwa yokuhweba. Siqinisekisile izidingo eziningi zabasebenzisi ngensizakalo. Phakathi kwabo, imibuzo ebaluleke kakhulu evela kubasebenzisi kanye nesithiyo sokusetshenzelwa kwakuwukucaciswa kokucaca kokungathathi isikhundla kanye nesikhundla. Sinqume ukusebenzisa ubuchwepheshe be-blockchain's smart KwonTrect ukukhulisa izinsizakalo zethu ezifakazelwe. Ngaphezu kwalokho, izinsizakalo eziningi ezikhona bekufanele zisingathwe ngabasebenza ngokwabo. Isingeniso Izizathu Ezingaphezulu Zokwakha Izimpi Zokuhweba eBlockchain[...]
Ukukhiqiza inzuzo okubalulekile ngisho nezimali ezincane zokutshala imali
Ukuhlinzeka ngezinsizakalo zokwenza inzuzo ngamakhono okuhweba, hhayi inani elincane lemali ekhiqiza inzuzo, ngisho nezimali ezincane zokutshala imali. Ekushintshisaneni okukhona, i-0.1ETH ingatshalwa ukuze ufinyelele isivuno se-100%, kepha kungatholakala i-0.2ETH kuphela. Kodwa-ke, ngensizakalo yethu yempi yokuhweba, ungatshala i-0.1 ETH futhi uthole i-1.0 ETH empini eyodwa. Insizakalo yeDynamic ethola inzuzo ngesikhathi esisodwa empini kusuka ekutshalweni kwezimali olindela ukwanda kuphela ngemuva kokutshala imali Isingeniso Ukwakha inzuzo enenzuzo ethe xaxa ngezimali ezincane zokutshala[...]
Umbono Wenkonzo Yokuhweba Yempi
Ihlose ukuhlinzeka ngezinsizakalo zempi yokuhweba ezingafinyelela imbuyiselo ebalulekile ekutshalweni kwezimali ngisho nakwimali encane. Insizakalo yokuhweba ye-Cryptocur lwemali ixazulula inkinga yokuthengiswa kwe-liquidity ngokwakha insiza ngokusebenzisa i-Open API yokushintshaniswa kwe-cryptocur lwemali ngokuhlinzekwa okuningi kwe-liquidity. Enkonzweni yethu, ikhono lokuhweba lomsebenzisi libaluleke kakhulu. Bonke abasebenzisi bangena egumbini lokulwa abalifunayo futhi bancintisane ngokuhweba ngamafa asebenza afanayo. Isingeniso Ngaphezulu Ukuhweba Service Battle Vision[...]
Ungadonsa kanjani izimpi ezilula & imidlalo mini Izinkinga zokugembula
Umphakathi Q. Ungabheja kanjani empini elula ne-mini-game kungaba yinkinga kamuva ngokugembula? ISIKHULU: Sabuyekeza izindaba zomthetho nokuqukethwe kophenyo, kanti iFX neminye imidlalo efana nale iyinkinga ngoba ivuzwa ngemiphumela. . Umphakathi Q. Uma ungumuntu olungile wokuhweba, ungasebenzisa umugqa Ukwethula okuningi ukuthi ungabheja kanjani empini elula ne-mini-umdlalo Inkinga ngokugembula[...]
Ingabe kukhona ukushintshana okuhlela ukuhlela ku-2020?
Ingabe kukhona ukushintshana okuhlela ukuhlela ku-2020? CEO: Sinikeza ngezinsizakalo ze-bot ekunikezelweni okuningi kwe-cryptocurrency futhi sixhumana nezikhulu zokushintshana. Kodwa-ke, njengoba silungiselele isikhathi eside, silungiselela ukufakwa kuhlu lokuqala ekushintshanisweni okukhulu, ngakho-ke uma ufuna ukubheka uhlu lwakusasa, sicela ungene egumbini lethu leTelegram ngaphambi kwesikhathi ukuze ubone isimemezelo sesikhathi sangempela. Futhi le phrojekthi ihloselwe insizakalo yomhlaba jikelele kunenkonzo yaseKorea. Isingeniso Ngaphezu kwalokho Ngabe kukhona ukushintshana okuhlela ukuhlela ngo-2020?[...]
Ngingabamba iqhaza emiqhudelwaneni eminingi ngasikhathi sinye?
Q. Ngingakwazi ukudala amakamelo amaningi futhi ngibambe iqhaza emiqhudelwaneni eminingi ngasikhathi sinye? CEO: Noma yimuphi umsebenzisi angadala amagumbi amaningi empi futhi abambe iqhaza kumagumbi amaningi empi. Uhlelo olukhona njengamanje luhlela inani eliphakeme lababambe iqhaza abayi-10. Sihlela ukulungisa umkhawulo wokubamba iqhaza okuningi ngenkathi ubuka izidingo zabasebenzisi kanye nezimo zokubamba iqhaza eziningi. Q & A isigaba soMphakathi Q. Uma ubheka iphepha elimhlophe, Isingeniso Ngingabamba iqhaza emiqhudelwaneni eminingi ngasikhathi sinye?[...]
Abasebenzisi abaningi kuphela abazokwazi ukulwa nokuhweba
Inani elikhulu kuphela labasebenzisi elizokwazi ukulwa nokuhweba Q. Yiziphi izinzuzo abasebenzisi abangazithola? Ngaphezu kwalokho, kubonakala sengathi kuzoba nabasebenzisi abaningi abazokwazi ukwenza izimpi zokuhweba. CEO: Okwamanje, kunemibuzo eminingi etholakele ngokubambisana ne-PR nemisebenzi yezentengiso eKorea naphesheya kwezilwandle. Sihlela ukusebenzisana ngokugcwele nabathengisi ekuxhumaneni, futhi sihlele izithombe zesikhulumi ngokusingatha imincintiswano yokuhweba eqhuba imikhiqizo njalo. Ukwethula abasebenzisi abaningi ukuba nempi yokuhweba enabasebenzisi abaningi[...]
Thenga futhi usebenzise amathokheni we-TBET nezinto ezincishisiwe
Q. Ezimpini zokuhweba, setha isikhathi, umklomelo, njll., Nezinto zokuthenga ezincishisiwe ngezephulelo ze-TBET.Lolu phawu lusetshenziselwa futhi ukudala amakamelo empi, futhi yini oluhlukanisa phakathi nezinsizakalo zokutshala imali ezikhona ezikhona? Ucabanga ukuthi siyini isizathu sokusebenzisa insiza yokulwa yokuhweba nezinzuzo (ukubuyisa, njll.) Oyitholayo!? CEO: Ngiyaqonda ukuthi inhloso kanye nezinzuzo zokusebenzisa utshalomali olungafani nezehlukile. Inzuzo enkulu yokusebenzisa impi yokuhweba ukuthengisa izimpahla zedijithali Yethula amathokheni amaningi e-TBET, izinto ezincishisiwe ezisetshenziselwa ukuthenga[...]
Insiza yempi yokuhweba ngendlela eyenza imali ngamakhono okuhweba ahlanzekile
Q. Uma ufunda iphepha elimhlophe, amathokheni e-TBET kuthiwa akhulisa inzuzo ngezinsizakalo zokulwa zempi ngokuzuza kusuka kumakhono wokuhweba amsulwa, hhayi ngokupompa imali ngamandla wezezimali.Isibonelo, inzuzo engu-0.1% ephindwe kabili nge-100ETH Uthola i-2 ETH ngaphakathi, kepha ithokheni ye-TBET ithi noma ungatshala imali efanayo engu-0.2 ETH, ungazuza i-0.1 ETH empini eyodwa. Ngaphezulu, izwa kufana nokuhweba kwe-margin, kepha umehluko phakathi kokuhweba kwasemayini nenkonzo yokuhweba yamathokheni we-TBET Ukwethula insiza ethe xaxa yokulwa ngendlela eyenza imali ngamakhono ahlanzekile okuhweba[...]
Ukwakhiwa kwegumbi lempi kuyadingeka ekulweni izimpi
Q. Kuyaziwa ukuthi uma kudalwa ukwakhiwa kwamagumbi okuhweba ezimpi zokuhweba, futhi inani eliphansi lababambiqhaza alibambi iqhaza egunjini lokulwa elenzelwe, ithokheni ye-TBET esetshenziselwe ukudala kanye nokususwa kwegumbi lokulwa ngeke libuyiselwe. Uma kunjalo, yisiphi isibalo esincane sabantu esidingekayo futhi yiziphi ezinye izindlela zokuphakamisa igumbi lami lokulwa? ISIKHULU: Inani elincane labantu lokuqala le mpi, kubandakanya nomholi Isingeniso More Ukulwa impi kudinga ukudala igumbi impi.[...]
Yini umfutho oqhubekayo wamathokheni we-TBET?
U. Ngokombono womtshalizimali, ngithanda ukuthi iphrojekthi inyuse inani layo lokutshala imali ngokuthuthuka okuqhubekayo. Endabeni yezimpi zokuhweba, ngiyazibuza ukuthi kungumcimbi wesikhashana esifushane. Uyini umfutho oqhubekayo? Imicimbi ehlobene nokuhweba ibanjwa ngezikhathi ezithile ngezikhathi ezithile. Izinhlamvu zemali ezikhishwe ngokushintshana nazo zinikezwa njengembuyiselo. Yini ehlukile kulokho? CEO: Kuze kube manje, izinsizakalo ezintathu ziyatholakala ngokusebenzisa amathokheni we-TBET endaweni yesikhulumi. Ngefomu lokuthi wonke umuntu udla i-TBET ngokuqhubekayo Isingeniso Ngaphezulu kwamanani amathokheni e-TBET aqhubekayo?[...]
Asetshenziswa kanjani amathokheni e-TBET?
Q. Asetshenziswa kanjani amathokheni e-TBET? Uyini umehluko kusuka endaweni yesikhulumi esivele ikhona? I-CEO: ithokheni ye-TBET yi-cryptocurrency ezosebenza ekusebenzeni kwemali ekusetshenzisweni kwephrojekthi nasekusetshenzisweni kwempi yokuhweba, futhi ukusetshenziswa kwenkonzo empini yokuhweba kwenzeka kuphela ngethokheni ye-TBET. Amathokheni we-TBET asetshenziswa okokuqala, izaphulelo ngemali yokuhweba yokulwa. Isimo senkonzo yokulwa yempi ingahluka noma isivuno singu-0.01%. Futhi izingcaphuno eziphansi Isingeniso Ngabe lusetshenziswa kanjani ithokheni ye-TBET?[...]
Iyini Ipulatifomu Yempi Yokuhweba?
Q. Yiliphi Ipulatifomu Yempi Yokuhweba? Kubukeka sengathi kuyipulatifomu engajwayelekile, kepha ngicela uyichaze kabanzi. ISIKHULU: Ukuhweba Impi yindawo yokuhweba ehlanganisa izinto ze-'Battle 'ngokuhweba kwezimpahla zedijithali. Abasebenzisi babamba iqhaza egunjini lokulwa nemali yokuhlanganyela efanayo (i-ETH) ngaphakathi kwepulatifomu nokuhweba ngasikhathi sinye nezimali, bese ama-50% aphezulu abasebenzisi abanembuyiselo ephezulu abelana ngemali yokubamba iqhaza (i-ETH). Ngale ndlela yohlobo lwempi, abasebenzisi bangaphezulu kokuhweba besebenzisa ukushintshana okukhona. Isingeniso Ngaphezulu Kuyini Ukuhweba Ngengxenyekazi Yempi?[...]
Isingeniso Sokulwa Kweprojekthi Yempi
Q. Sicela uzazise kafushane ngephrojekthi yakho. CEO: Sawubona. Lo nguSuwon Kim, Umphathi Omkhulu Wokuhweba Ngephrojekthi. Ukuze ngizethule kafushane, ngisebenze njengomqondisi osebenza we-AvBot, okuyilungu lesevisi yokuhweba ezenzakalelayo yeBithumb, futhi ngathuthukisa ubuchwepheshe be-API obunikezwe ukushintshaniswa ukwethula iphrojekthi yamanje. Kuyadunyiswa ukuthi ngikwazi ukwethula iphrojekthi yokuqala evela eSikebheni Sokudoba Seshishi. Iphrojekthi yethu ayikona nje ukuthengisa nokuthenga emakethe ye-cryptocurrency, kodwa futhi nokuthengisa impahla yedijithali. Isingeniso Isingeniso Sokuhweba Sempi Yempi[...]
I-ID ye-Katok: 24MEX
I-1: 1 문의
I-Zerif Lite unjiniyela: ThemeIsle